तपाइँ ट्विटर को लागी कति तिर्नुहुन्छ? | Martech Zone
तपाइँ ट्विटर को लागी कति तिर्नुहुन्छ?
बुधबार, फेब्रुअरी 11, 2009 आइतबार, अगस्त 23, 2009 Douglas Karr
त्यहाँ केही हल्लाहरू थिए twitter वाणिज्य खाताहरूको लागि चार्ज गर्दै, तर यो ती देखिन्छ अफवाहहरु कुचिएका छन। मेरो राय मा, यो धेरै खराब छ।
ट्विटरले चार्ज गर्नुपर्ने तीन कारणहरू:
वाणिज्यिक सन्देशको लागि भुक्तान यसमा पाठ सन्देश स्प्याम कम गर्न महत्वपूर्ण भएको छ मोबाइल उद्योग। बनाउँदै व्यावसायिक प्रयोगकर्ताहरूले ट्वीटरमा भुक्तान गर्दा त्यहाँ बाहिर स्पिटेरर्सको संख्या कम हुने छ। म पैसा कमाउने भीडले मलाई पछाडि थाकिसकेको छु। सेवाको लागि भुक्तान गर्नु वा पठाईएको वाणिज्यिक ट्वीटहरूको संख्यालाई यी प्रयोगकर्ताहरूलाई असफल बनाउँदछ।
यो ट्विटर मार्फत बढ्दो राजस्वको लागि ठोस माध्यम हो। म ट्विटर सफल हुन र बढ्न चाहान्छु। बत्तीहरू राख्नको लागि लगानी कोषहरू प्रयोग गर्नु भनेको टिक टाइम बम जस्तै हो, विशेष गरी यो अर्थव्यवस्थामा।
ट्विटरमा मानिसहरू आफैंले ठट्टा गर्दैछन् यदि उनीहरूलाई लाग्छ कि यो ईमेलको स्थायी शक्तिको साथ सञ्चार माध्यम हो। ट्विटर गजबको छ, तर मँमा कुनै श .्का छैन कि कुनै पनि समय चाँडै अझ राम्रो चीज हुनेछ। यदि ट्विटरले व्यावसायिक यातायातमा क्यापिटलाइजेशन गर्दछ भने, त्यसले उनीहरूलाई पूँजी उपलब्ध गराउँदछ र प्लेटफर्मलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ - जे जे भए पनि अगाडि पछाडि राख्दै।
मलाई लाग्छ कि यो ट्विटरको लागि उत्तम विचार हुन सक्छ एपीआई एकीकृत अनुप्रयोगहरू उपयोगको लागि भुक्तान गर्दछ। यसले धेरै हास्यास्पद अनुप्रयोगहरू सफा गर्ने छ जुन ट्विटरमा भित्र डुबेको छ एपीआई यातायात।
म कति तिर्न सक्छु?
किनकि मेरो ब्लगले विज्ञापन र परामर्श शुल्कको माध्यमबाट वास्तवमा नाफा कमाउँछ, ट्विटर ट्राफिकले मेरो तल्लो लाइन कति प्रदान गरेको छ भन्ने गणना गर्न मेरो लागि यो धेरै सरल छ। मेरो ब्लग ट्वीटरबाट यसको ट्राफिकको%% र%% बीचको हुन्छ। यदि मैले गत बर्ष $ 5k बनाएको हो भने, म ट्विटरमा $ 8 लाई $ 10 को श्रेय दिन सक्छु। अवश्य पनि, म ट्विटरबाट नाफा लिन चाहान्छु, त्यसैले यदि मैले $ २500० - वा प्रति महिना २० डलर तिर्ने गर्छु भने त्यसले स्वच्छ नाफा प्रदान गर्दछ।
निस्सन्देह, Smippies व्याकुल हुँदै चिच्याउने छ… इन्टरनेट मा पैसा बनाउने? माइक्रो ब्लगिंग को लागी? Hogwash! एकदम इमान्दारीसाथ, मलाई लाग्छ कि महान अनुप्रयोगहरू जसले सञ्चारलाई सक्षम बनाउँदछ पैसा बनाउन को लागि योग्य छ।
यदि ट्विटर ट्राफिकमा क्यापिटलाइज गर्दैन र हालसालै यसमा पुगेको छ भने, तिनीहरू केवल पूँजीको बाहिर चलाउन सक्दछन् जबकि अर्को, सुधार भयो twitter बजारमा हिट हुन्छ र यो चंचल भीड अगाडि बढ्छ
प्रतिष्ठा प्राधिकरणको गाढा छाया हो
मलाई लाग्छ कि त्यहाँ त्यहाँ धेरै कम्पनीहरू (र Smippies) छन् जुन उनीहरूले बाँच्नको लागि पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने बिर्सन्छन्। यदि म दिनभर कोठामा बसेर नि:शुल्क उत्कृष्ट र अद्भुत एप्लिकेसनहरू सिर्जना गर्न सक्छु भने, म गर्छु! (मलाई पनि धेरै मद्दत चाहिन्छ।) दुर्भाग्यवश जीवन चरणहरू र बिलहरू तिर्नु पर्छ, र लगानीकर्ताहरूले फिर्ताको आशा गर्छन्।
म कल्पना गर्छु कि यदि ट्विटरले एपीआई प्रयोगकर्ताहरूलाई मात्र चार्ज गर्ने हो भने उनीहरूले आफ्नो आवश्यकतालाई वित्तपोषण भन्दा बढी गर्न सक्छन्।
यदि म गुगल भएको भए, मैले उनीहरूका लागि १.५ बिलियन तिर्ने थिएँ, उनीहरूले युट्युबको लागि के तिरेका थिए। उनीहरुले टिपेका छन् । युट्युबले टिपेको छ । स्काइपले टिप्यो। मेरो एउटा मात्र आरक्षण माइस्पेस कथा हो। यो 1.5 मा क्रोध थियो, त्यसपछि फेसबुकले तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा मेटाउँछ। तर तपाईंले आफ्नो शटहरू लिनु पर्छ।
व्यक्तिगत प्रयोगको लागि ट्विटर प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको रूपमा, म $ 5/महिना खर्च गर्नेछु र एक बिज मालिकको रूपमा, जसलाई थाहा छ कि म ट्राफिक पाउँछु, तर अझै के थाहा छैन, म त्यो पनि तिर्नेछु।
मलाई आशा छ कि twitter ले चार्ज गर्छ, मलाई यो उपकरण मनपर्छ, र यो वरिपरि होस् र विकास गर्न जारी राख्न चाहन्छु। Smippies dammed हो।
मई 17, 2009 मा 3: 05 PM
रूख फिट्टी रूख फिट्टी भन्दा मो छैन।